Buugga v3.0 | vfxAlert official blog
Ku saabsan vfxAlert nooca 3.0
Ku saabsan vfxAlert
vfxAlert waa aalad loogu talagalay ganacsatada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ay ugu adeegsan karaan istiraatiijiyaddooda ganacsi. Isticmaalka vfxAlert wuxuu u maleynayaa in adeegsadayaashu ay yaqaanaan mabaadi'da aasaasiga ah ee suuqa forex. Waxayna fahmeen mabaadi'da falanqaynta farsamada iyo hababka tirakoobka. Waxaa jira laba dariiqo oo waaweyn sida loo isticmaalo vfxAlert:
Abuur istaraatiijiyad ganacsi oo ku saleysan calaamadaha vfxAlert.
U adeegsiga algorithm la-qabsi ah oo loogu talagalay calaamadaha xaqiijinta istiraatiijiyadda ganacsi ee jira.
Gaar ahaan Kuwa Bilowga ah
Intiinna badani waxay u maleynayaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah inay fududahay, taasi gabi ahaanba waa khalad . Fadlan dareemo farqiga u dhexeeya fudud si looga ganacsado iyo si fudud lacag lagu kasbado. Fursadaha ikhtiyaariga ah waa fududahay in la ganacsado - taasi waa run ...
Laakiin ganacsiga guuleysta wuxuu u baahan yahay edbin iyo u hoggaansanaan adag xeerarka istiraatiijiyadda ganacsiga.
Aad ayey u adkaan doontaa in la fahmo waxa dhabta ah ee vfxAlert soo jeedineyso iyo sida loo isticmaalo dhammaan xogta tirakoobka. Taladayadu waa in la isticmaalo calaamadaha bilaashka ah ee nooca bilaashka ah lana barto falanqaynta farsamada iyo mabaadi'da tirakoobka.
Ganacsi 2 saacadood maalintii oo aan ka badnayn. Ka ganacsiga waqti isku mid ah maalin kasta.
Ganacsi calaamadaha muddada-dheer. (Min. 5 daqiiqo waqtiga dhicitaankiisa)
Wax ka baro hantida waxa aad ka ganacsaneyso. Sidee qiimaha u dhaqaaqaa kalfadhiyada kala duwan ee ganacsiga.
Eeg sida isbeddelku u saameynayo calaamadaha faa'iidada leh.
Eeg sida khariidadaha & awoodda ay saameyn ugu leeyihiin calaamadaha faa'iido leh.
Falanqee tirakoobkaaga ganacsiga.
Ka ganacsiga koontada demo.
Hal bil kadib waxaad dareemi doontaa suuqa oo suurto gal waxaad awood u yeelan doontaa inaad abuurto istaraatiijiyaddii ugu horeysay ee ganacsi.
Muhiim: Calaamaduhu ma aha talo soo jeedin ficil. Calaamaduhu waa natiijada falanqaynta suuqa ee algorithm gaar ah, ganacsade waa inuu fahmaa sida calaamadaha loo sameeyay, iyo waxa u janjeera suuqa hadda inuu sameeyo go'aanka saxda ah.
Muhiim: vfxAlert ma bixiso xeelado ganacsi. vfxAlert waxay bixisaa calaamadaha iyo tirakoobka waqtiga-dhabta ah iyadoo kuxiran qiyamka tilmaamayaasha hadda jira. Hoos eeg:
Istaraatiijiyadda ganacsigu waa nidaam xeerar, oo ku saleysan ganacsaduhu uu gaaro go'aankiisa . Nidaamka noocan oo kale ah waxaa loo sameeyaa kaliya iyadoo lagu saleynayo khibrad ganacsi oo shaqsiyeed, aqoon soo xaabtay iyo xirfado la soo helay. Istaraatiijiyaddu waxay u oggolaaneysaa faham qoto dheer oo ku saabsan qaabdhismeedka suuqa iyo farsamooyinka howlaheeda, sidaas darteed, ciyaaryahanka sarrifka wuxuu sameeyaa go'aanno ku saleysan xaaladda taagan. Iyadoo lagu saleynayo istiraatiijiyad shaqsiyeed, ganacsade wuxuu horumarin karaa nidaamyo ganacsi oo dhowr ah una isticmaali karaa iyadoo kuxiran xaaladaha suuqa. Istaraatiijiyaddu had iyo jeer waxay tixgelisaa arrimaha aasaasiga ah, xogta tirakoobka, iyo sidoo kale boostada aasaasiga ah ee halista iyo maaraynta lacagta.
Hantida - falanqaynta lacagta lamaanaha.
Qiimaha - qiimaha hadda jira markii ay muuqatay calaamadda (algorithms-ka la-qabsiga ah - qiimaha furan ee shumaca hadda jira)
Waqtiga - tan iyo muuqaalka calaamadaha (loogu talagalay algorithms la-qabsiga waqtiga tan iyo cusbooneysiintii ugu dambeysay)
Dhamaad - waqtiga dhicitaanka lagu taliyay.
Awood - boqolkiiba guul taariikhda
Saxiix - WAC ama PUT
Algorithm - calaamado jiil algorithm.
Heatmap - Wuxuu muujinayaa boqolleyda ku guuleysiga tirakoobka ee loo xisaabiyay qiyamka tilmaameha farsamo ee waqti kala duwan.
Awoodda & Heatmaps
Awoodda & Heatmaps - waa xog tirakoob oo calaamado guul leh lagu dhammaystiray. Awooddu waxay muujineysaa xogta tirakoobka ee tilmaame hadda jira # 1 qiime hal waqti go'an. Heatmaps-ku waxay muujinayaan xogta tilmaamaha hadda jira ee # 2 qiimaha waqti go'an kasta.
Xisaabinta xogta tirakoobka waxaan u isticmaalnaa calaamado dhameystiran kaydkeena. Waan arki karnaa sida tilmaamayaasha u qiimeynayaan kalfadhiyada kala duwan ee ganacsiga ay saameyn ugu yeelanayaan calaamadaha guuleysta boqolkiiba.
Si aad go'aan u gaarto, waa inaad falanqeysaa xoogga ishaarada iyo khariidadaha kuleylka. Falanqaynta khariidadaha kuleylka, waa ku filan tahay in lagu falanqeeyo qiyamka xilliyada ugu dhow ee la xiriira waqtiga uu dhacayo calaamaddu. Waqtiga dhicitaanka ee 1 daqiiqo - falanqee qiimaha M1 M5 - daruuri, M15 - waa suurad wacan. M30, H1, H4 - waa la iska indhatiri karaa.
Waqtiga dhicitaanka 5 - falanqeeyaan M5, M15, M30 - daruuri, M1, H1, H4 - waa la iska indhatiri karaa iwm.
Muujiyeyaasha dhismaha khariidadaha:
RSI - Heerka qaraabada ee qaraabada ah ee muddo 12 ah
ATR - Average True Range muddo 12 xilli ah
Xoog - Tilmaanta Xoogga ee muddo 12 waqti ah
Bears - Awood u leh 12 wakhti oo wakhti ah
Dibi - Dibida Awoodda muddo 12 wakhti ah
sRSI - Heerka qaraabada ee qaraabada ah muddo 4 xilli ah
sATR - Average True Range muddo 4 xilli ah
sBears -Bears Power muddo 4 xilli ah
Isbeddel - Tilmaame Trend
Adaptive - Algorithm-ka la-qabsashada wuxuu adeegsadaa falanqaynta tirakoobka ee xogta taariikhiga ah. Marka la barbardhigo calaamadaha qadiimiga ah ee ay calaamaddu ku siiso xaalado gaar ah, algorithm-ka la-qabsashada ah ayaa lagu falanqeeyay shumac kasta oo taariikhda la qiimeeyo, tani waa isku mid haddii calaamadaha la siiyay daqiiqad kasta ama 5 daqiiqo oo ku xiran waqtiga dhicitaanka. Sidaa darteed, istiraatiijiyadda la-qabsiga waxay muujineysaa xilliga ugu habboon ee suuqa lagu galo.
Trending - Tilmaamayaasha farsamo ee soo socda ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro calaamadaha:
CCI (12 xilli) calaamadaha:
WAC - isgoyska 0 heer ee 100.
SII - gudbaya heerka 0 laga bilaabo - 100.
WAC - Soonka MA (5) isgoyska Isgoyska Slows MA (17) min kor ilaa hoos.
FUT -Fast MA (5) isgoyska Slows MA (17) hoos ilaa kor.
! muhiim Ka hel calaamado been ah suuqa fidsan.
Dib-u-celin - Tilmaamayaasha farsamo ee soo socda ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro calaamadaha:
RSI (12 xilli) calaamadaha:
WAC - ka talaabida heerka 30 hoos ilaa hoos ilaa kor.
PUT - ka gudubka heerka 70 min kor ilaa hoos.
Parabolic SAR calaamadaha:
WAC - ugu yaraan 7 qiimeynta horudhaca ah ee qiimaha & qiimaha hadda ka sarreeya qiimaha.
PUT - ugu yaraan 7 qiimaynta aragtida ka saraysa qiimaha & qiimaha hadda jira ee ka sarreeya qiimaha.
! muhiim Ku hel calaamado been abuur ah oo ku saabsan suuqa ganacsiga.
Waa suurtagal in la isticmaalo shuruudo kasta oo ku saabsan sameynta calaamadaha, laakiin inta badan, dhammaantood waxay siinayaan calaamado isku dhow. Haddii aad hayso talo soo jeedinno xiiso leh oo ku saabsan ku darista algorithms-ka calaamadaha, u qor [email protected] Anaga ahaan, macno malahan sida astaantu u sameysan tahay - Astaamaha astaamaha iyo khariidadaha kuleylka ayaa si otomaatig ah loo xisaabin doonaa sida ugu dhakhsaha badan marka la helo xog tirakoob oo ku filan (ugu yaraan calaamadaha 2000)
Calaamadaha calaamadaha leh ee waqtiga dhicitaankoodu yahay 1 daqiiqo, waa ku filan tahay in lagu qiyaaso khariidadaha kuleylka illaa 3 xilli M1, M5, M15. Khariidadaha kuleylku ma muujiyaan natiijooyin aad u wanaagsan oo awoodda calaamaddu waa caadi. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ahaato mid aad u sax ah maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa M1 aad ayuu u liitaa, taasna tirakoobkuna aad uma xasilloon yahay. Malaha ma furi doono booska halkaan. Laakiin haddii aad sameyso falanqeyn dheeraad ah
Digniintu waxay leedahay awood calaamadeed oo wanaagsan iyo khariidadaha kuleylka. Waan sii jeclaan lahaa qiimaha tilmaame ee RCI haddii dulinka dhaqaaqa uu kor u socdo, waxaan furi lahaa booska CALL. Tani waa calaamad aad u wanaagsan. Xaaladaha badankood, waxaan furi lahaa booska aniga oo aan ka fikirin.
Tani waa calaamad aad u wanaagsan. Xaaladaha badankood, waxaan furi lahaa booska aniga oo aan ka fikirin.
Digniintu waxay leedahay awood calaamadeed sare, laakiin khariidadaha kuleylka ma muujiyaan qiimeyaal aad u wanaagsan. Waxay u badan tahay in qiima weyn oo astaamaha signaalku uu ugu wacan yahay isku-xirnaansho la'aanta tilmaamayaasha. Calaamaddan shaki ayaa ku jirta. Way habboon tahay in la furo boos haddii ay jiraan arrimo suuq oo dheeri ah. Tusaale ahaan, suuqa isbeddel xoog leh oo kor u kaca ah, xaaladdan oo kale, waad furi kartaa booska Wicitaanka oo waxaad kordhin kartaa waqtiga dhicitaanka illaa 8-12 daqiiqo
Tani waa baaq xiiso leh. Awoodda calaamadaha iyo khariidadaha kuleylka waxay muujinayaan qiime aad u liita. Qiimaha calaamadaha noocan ah ayaa soo baxa marka algorithm-ka calaamaddu uusan ku shaqeynaynin qiimaha hadda ee tilmaamayaasha, waxay u badan tahay inay ka dhigan tahay in suuqa uu is beddelayo ama uu durbaba jihada u beddelay. loo tixgeliyey ka ganacsiga dhinaca ka soo horjeedka.
Si aad ula qabsato rukunka telegramka raac talaabooyinkan:
1. Tag telegram-kaaga gacanta oo raadso @vfxAlert_bot
2. Qor amarka Token
3. Nuqul oo ku dhaji calaamaddan bogga dejimaha oo dhagsii badhanka "Ku xir"
4. Xullo Hantida, Algorithms ... waxaad dooneysaa inaad hesho oo aad gujiso batoonka "Cusboonaysiinta dejinta"
5. Si aad u bilowdo amarka nooca bot-ka ah Start inaad joojiso bot-ka Stop ama dhagsii badhanka hoose ee telegram-kaaga
* Baangado 1 daqiiqo oo ah waqtiga dhicitaanka ayaa loo diraa sida qoraalka, kuwa kale ayaa u dira calaamadaha sida sawirka oo kale.
Bilaash ah - wuxuu ku siinayaa inaad marin u hesho dhammaan calaamadaha iyo tirakoobyada dheeraadka ah (xoogga & khariidadaha) 2 hanti ah oo aan kala sooc lahayn.
Koontada - xisaabta waxay siisaa fursadaha soo socda ee soo socda -
Awoodda calaamadaha dhammaan hantida
Ka saar Xayeysiiska
Waad ku dari kartaa dallaal kasta liiska dallaalka barnaamijka vfxAlert
HeatMaps - si otomaatig ah u tirakoobaysa calaamadaha faa'iidada leh waxay kuxirantahay qiimaha tilmaamaha hadda jira
Sifeeyaha calaamadaha - aaladda raaxada ee calaamadaha la sifeeyay
Diiwaangelinta signalada - waxaad kuheleysaa calaamado emayl ama SMS
Tirakoobka la kordhiyay
Si aad u hesho koontada Pro aad dukaanka .
Waxaan ku bixiyaa shatiga Pro, laakiin ma aanan helin?
Laga yaabee inaad bixisid kadib markaad riixi weyday "dib u kaydi" iskuxirka taas oo ah sababta liisanka aadan u codsanayn otomaatig ahaan.
Mararka qaarkood ka shaqeynta lacag bixinta waqti ayey qaadataa, waxay qaadan kartaa foomka 1 illaa 30 daqiiqo. Fadlan samir. Si aad u hubiso liisankaaga u tag golaha shaqsiyadeed:
Weli, haddii aadan ku guuleysan inaad hesho rukhsadda lacagta lagu siiyay, u qor [email protected]
Waa maxay sababta Calaamadaha aan loo cusbooneysiin? Maxay calaamadaha u muuqan waayaan?
Sababta ugu horeysa (99%): Suuqa forex ee usbuuca dhammaadkiisa waa xiran yahay, sicirka lacagaha ma dhaqaaqaan, marka calaamadaha cusub uma muuqdaan.
Sababta labaad (1%): Quotes Server ma shaqeyso sababo jira awgood.
Sida loogu daro dallaalkeyga liiska dallaalka vfxAlert?
Dillaaliin dheeraad ah ayaa loo heli karaa koontada Pro. Waxaad ku dari kartaa dillaaliin kasta halkan. Xisaabaadka bilaashka ah ee la heli karo dalaaliinta dallacayaasha kaliya.
Ma ku bixin karaa Skrill ama Perfectmoney?
Haa, waad awoodaa.
Xisaabinta qiimaha - qiimaha liisanka + 10%
Geedi socodka :: Dooro liisanka dukaanka -> lacag -> u qor [email protected] wixii ku saabsan lacag bixinta.
Halkan faahfaahinta lacag bixinta:
Skrill: si ku meel gaar ah looma heli karo
Ka dib bixinta waxay u dirtaa emayl - [email protected] macluumaadka soo socda:
Xisaab Email ama magac soo gal
Koontada Pro way shaqeyn doontaa inta lagu jiro 24 saac.
Waa maxay digniinta?
Digniinta - waxay lagama maarmaan u yihiin oo keliya dirista calaamadaha telegram bot. 1 Digniin = 1 signal la diray. Si aad u isticmaasho Digniinta waxaad u baahan tahay koonto Pro
- Waa maxay faa'iidooyinka calaamadaha?
Faa'iidadu kuma xirna calaamadaha - faa'iidadu waxay ku xiran tahay ganacsadaha iyo istiraatiijiyaddiisa ganacsi. Waxaan haynaa tiro badan oo isticmaaleyaal ah dhammaantoodna waxay adeegsadaan calaamado isku mid ah, laakiin dhammaan ganacsatadu waxay ku ganacsadaan siyaabo kala duwan. Qaabkaas ayay ganacsatada qaar ugu guuleystaan tan kale. Awoodda calaamadaha waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo tirakoobka calaamadaha. Wuxuu muujinayaa wixii la soo dhaafay, taasi waa, boqolleyda natiijooyinka togan ee isla xaaladda suuqa ee hore.
Ganacsiga waxaa jira arrimo aad u tiro badan oo ganacsade ay tahay inuu tixgeliyo:
Xigashooyinka farqiga u dhexeeya dallaaliinta.
Dhaqdhaqaaqa suuqa yar
Fadhiga ganacsiga ee hadda
vfxAlert waa adeeg calaamadaha iyo tirakoobka. vfxAlert waa aaladaha ganacsade Ganacsade kastaa waa inuu abuuraa istiraatiijiyad ganacsi oo u gaar ah oo ay ku jiraan kaliya calaamadaha laakiin sidoo kale waxyaabaha sida:
Nooca istiraatiijiyadda (Dib u noqoshada ama isbeddellada, isku dhafan - kaliya ganacsatada khibradda leh)
Xeerarka gelitaanka suuqa
Lammaanaha Lacagta (Istaraatijiyadaha ganacsigu had iyo jeer isku si uma wada shaqeeyaan isla markaana ku shaqeeya lammaanaha kala duwan)
Kasban kaliya kuwa ganacsatada ah ee sida adag uraaca istiraatiijiyadooda ganacsi. Dhamaan ganacsatada kale waxay si fudud u ciyaaraan khamaarka.